आईफोन अभिलेखहरू - स्मार्टमे
ट्याग अभिलेखहरू: आईफोन
डोम » "आईफोन" सँग ट्याग गरिएका प्रविष्टिहरू
प्रमोशनल मूल्यमा नयाँ एप्पल मोडेल। लायक खरीद?
स्याऊ, iphone, आईफोन १२ मिनी, पदोन्नति
भर्खर, आईफोन १२ मिनी मोडलको बारेमा धेरै कुरा भएको छ, जुन धेरै उपयोगकर्ताहरूले सोध्ने सानो आकारको बावजुद स्मार्टफोन बजारमा त्यति सनसनी पैदा गर्न सकेको छैन। अबदेखि, एप्पल उत्पादन नयाँ मा किन्न सकिन्छ ...
आईफोन ११ प्रो एक महीनामा जमेको तालको तलमा बाँचे!
स्याऊ, iphone, आईफोन 11 प्रो
एप्पलले भर्खर आईफोन १२ को टिकाउपनको बारेमा गर्व गरे, जुन यो आवासको गिलास भागहरूमा नयाँ कोटिंगको लागि .णी छ। यसैबीच, आईफोन ११ प्रो एक महिनाको लागि स्थिर फ्रिजको फेदमा उभिए! अतुलनीय टिकाऊपन CTV समाचार द्वारा रिपोर्ट गरिएको अनुसार ...
टच आईडीको साथ आईफोन १ यो लगभग निश्चित छ
स्याऊ, iphone, टच आईडी
म्याक्रोमर वेबसाइटले जानकारी फेला पारेको छ कि यस बर्षको एप्पल आईफोन १ 13 स्मार्टफोन मोडेलहरू स्क्रिनमुनि फिंगरप्रिन्ट रिडरले सुसज्जित हुनेछन्। यसको मतलब छिटै टच आईडी समारोह समानान्तरमा उपलब्ध हुनेछ ...
आईफोन १ नयाँ कनेक्टर पाउनुहुनेछ? एप्पल एक रोचक विचार छ
स्याऊ, iphone, iphone 13
हामी सबै पहिले नै आईफोन १ut को डेब्यूको लागि अधीरताका साथ पर्खिरहेका छौं। सबै कुराले संकेत गर्दछ कि भर्खरको एप्पल स्मार्टफोन नयाँ कनेक्टरले सुसज्जित छ। यो कस्तो देखिन्छ र यो प्याटेन्ट के हो? एप्पल एक नयाँ परिचय ...
एप्पल नयाँ समाधानको परीक्षण गर्दैछ। आईफोन प्रयोगकर्ताहरूले एक अद्वितीय सुविधा प्राप्त गरे
आईओएस १.14.5..XNUMX को लागि नयाँ तेस्रो संस्करणले आईफोन प्रयोगकर्ताहरूका लागि केही उपयोगी परिवर्तनहरू शुरू गर्‍यो। एप्पल के आईरहेको विचार हेर्नुहोस्। एप्पलले नयाँ सुविधाहरू प्रस्तुत गर्‍यो नयाँ अपडेटमा धन्यवाद, तपाईं आवासमा स्याउ भएको उपकरणहरू मात्र ट्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ, ...
आईफोन १ ले १ टिबी मेमोरी पाउनेछ?
सबै कुराले संकेत गर्दछ कि आईफोन १ आन्तरिक मेमोरीको १ टीबीको साथ सुसज्जित हुनेछ। अहिलेसम्म, यो विकल्प आईप्याड प्रो प्रयोगकर्ताहरूको लागि मात्र सम्भव थियो। अब त्यो परिवर्तन हुन लागेको छ। अधिक मेमोरी संग आईफोन? ...
एप्पलले पूर्ण रूपमा जापानी बजारमा प्रभुत्व जमाएको छ
स्याऊ, iphone, स्मार्टफोनहरू
जापानको स्मार्टफोन बजारको प्रतिवेदनमा आईडीसी विश्लेषकहरूले स्पष्ट रूपमा संकेत गरे कि एप्पलले यो बजारमा सम्पूर्ण प्रभुत्व जमाउन सक्छ। डाटाले सम्पूर्ण २०२० र यसको चौथो क्वाटर कभर गर्दछ। पछि एप्पल को कुल प्रभुत्व ...